फेसबुकको माध्यमबाट ठगी गर्ने दुई पक्राउ » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०७:४६ मा प्रकाशित !
१९ फागुन, चितवन। पछिल्लो समय निकै चलेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले विश्वलाई साँघुरो घेरामा ल्याएको छ । तर यसको दुरुपयोगका कारण धेरै नागरिक ठगिदै पनि आएका छन । कतिपय यसबाट नराम्रो गरी पीडित समेत बनेका छन । फेसबुककै कारण चितवनको सौराहाकी एक महिला ठगिएकी छन ।
अन्य तुलसीपुर, धरान, काठमाडौँ बस्दै पैसा ठगी गर्ने गिरोहको खोजी कार्य भइरहेको उनले बताए । पक्राउ परेका व्यक्तिको खातामा न्यौपानेले पहिलो चरणमा एक लाख ७६ हजार पठाएको थियो ।
फेसबुक चलाउँदै आएकी न्यौपानेलाई फेसबुककै माध्यमबाट उनीहरुले ठगी गरेका हुन । साथी बनिसकेपछि नाटकीय ढङ्गले उनीलाई ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । न्यौपानेको श्रीमान व्यवसायी हुन । त्यहि आधारमा ठगले प्रपन्च रची ठग्न सफल भएको प्रहरीको अनुमान छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार चालु आवको पछिल्लो तीन महिनामा ७९ वटा लेनदेन तथा चेक वाउन्सका ठाडो उजुरी परेका छन । जसमध्ये कमै मात्रको लेनदेन टुङ्गिएको छ ।
अधिकांश यस्ता कारोबार हुने गरेका विदेशमा बसेर आफन्तलाई वा साथी भाइलाई विदेश लैजाने बाहनामा ठगी गर्ने गरेको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताए । यस्ता काममा संलग्नको खोजीलाई तीव्र पारिएको उनले बताए ।
PREVIOUS POST Previous post: एमालेको मेची–महाकाली अभियान
NEXT POST Next post: स्ववियुको चुनाव हारेपछि आत्महत्या
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०७:४६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०७:४६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०७:४६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०७:४६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, फाल्गुन १९, २०७३ ०७:४६